Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo magacaabay gudoomiye degmo cusub - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo magacaabay gudoomiye degmo cusub
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo magacaabay gudoomiye degmo cusub
Muqdisho (Caasimada Online)-War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng,Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) uu magacaabay Guddoomiyaha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Guddoomiyaha Gobolka ayaa waxaa Guddoomiyaha cusub ee Degmada Hodan loogu magacaabey Cabdixakiin C/raxmaan Ciise (Dhagajuun) kaas oo la filayo in uu dhawaan xilka la wareego.
Guddoomiyaha Gobolka ayaa sheegay in magacaabida Guddoomiyaha cusub ay ku imaaday latashiyo uu la sameeyay dhinacyada waxgaradka.
Guddoomiyaha degmada Hodan ayaa waxaa horay u ahaa Maxamed Axmed Cantoobo,balse waxaa xilkaasi laga qaaday ka dib markii loo magacaabay Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee Maamulka Gobolka Banaadir.
Dhawaan ayaa lagu wadaa in isku shaandheyn iyo xil ka qaadis lagu sameeyo dhammaan Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir.